Iindlela ezintsha zePurificación García zehlobo | IBezzia
Iindlela ezintsha ezivela kuPurificación García zehlobo
UMaria vazquez | 29/04/2021 18:00 | Ndinxiba ntoni
Embindini wobusika safumanisa umbono omncinci wale wangoku ingqokelela yePurificación García. Ingqokelela ebanzi kakhulu ye-SS21 phakathi kwezinto ezintsha sifumana iindlela ezintathu ezintsha zenkampani. Ngaba unokuqikelela ukuba ziziphi na ezivela kwimifanekiso engaphezulu?
Mhlawumbi uziqashele. Iyokuqala inombala njenge protagonist yayo; ngokukodwa, umbala oorenji onzulu. Ezishiyekileyo zibhekisa kwiintlobo ezimbini zokuprinta: ukushicilelwa okunemigca kunye nokuprintwa kwezityalo okanye iintyatyambo. Imikhwa emithathu ethi, nangona kunjalo, ayisiyiyo kuphela kwingqokelela entsha yenkampani yaseSpain.
3 Ukuprintwa kweentyatyambo
Kuyamangalisa ukufumana iorenji ebalasele kwingqokelela yePurificación García. Sifumana kwi iziqwenga ngokuprinta kwezobugcisa njengengubo enemikhono emide engenamikhono kunye nehempe ende ehamba kunye neelaphu, iipokotho ezongezelelekileyo ezinkulu kunye namacala asecaleni. Kodwa nakwiimpahla ezingenanto ezifana nebhatyi engacwangciswanga enemigca engaphezulu kunye nemiphetho okanye ibhatyi yesikhumba. Iimpahla ezingagungqiyo ukudibanisa nezinye ezimhlophe.
Imigca ethe tye kwaye emi nkqo, imivumbo ebhityileyo netyebileyo ... Iindidi zemivumbo zivela phakathi kwezinto ezintsha zePurificación García. Zonke, nangona kunjalo, zabelana ngento enye ngokufanayo, Banikwa ngombala omnyama nomhlophe. Ngolu shicilelo, uyakufumana iilokhwe ezinamafu, ibhulukhwe ethe nkqo kunye neebhatyi ezinamabele aphindwe kabini kwikotoni yesiphumo sobusi kunye nepinstripe. Nangona iya kuba sisiketi esivuthayo midi kunye nebhatyi yomqhaphu enemigca ethe tyaba eya kutsala umdla wakho.
Eyokuqala botanical, eqaqambileyo kwaye enemibala. Iintyatyambo zesibini ezimnyama namhlophe ezimnyama. Ngaba sele unayo into oyithandayo? Ibhaluni isike umsele wedyasi kwi-nylon eqhotyoshelwe nge-neckline ejikelezileyo kunye nesinxibo se-midi kwi-crepe e-graved enemikhono emifutshane ekhukhumeleyo kunye ne-balloon cut skirt zizinto esizithandayo ezishicilelweyo zezityalo.
Phakathi kwabo bane Ukuprintwa kweentyatyambo ezimnyama namhlophe Sikhwankqiswe ngokukodwa sisinxibo esincinci esime nkqo kunye nebhulukhwe, zombini e-crepe eneenkcukacha zemibhobho eyahlukileyo. Nangona singafuni ukuyeka ukukhankanya ibhatyi yebhombu kuba inokuba lihlakani elikhulu lokugqibezela iimpahla ezahlukileyo ehlotyeni.
Ngaba uyazithanda izindululo zikaPurificación García zehlobo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » Iindlela ezintsha ezivela kuPurificación García zehlobo